Kulan aqoon isweydaasrsi oo ku saabsanaa arimaha dhaqanka Soomaalida iyo barbaarinta caruurta oo lagu qabtay Tilburg, Nederland - iftineducation.com
iftineducation.com – Kulan aqoon-isweydaarsi ah socday hal maalin oo qeyb ka ah mashruuc balaaran oo loogu magacdaray ” ‘Caraweelo’ oo ujeedadiisu ay tahay sidii loo saxi lahaa caadooyinka xun ee ku jira dhaqanka Soomaalida, ayaa todobaadkan lagu qabtay magaalada Tilburg oo ka tirsan gobolka Noord-Barabant ee dalka Nederland.
Aqoon-isweydaarsigaasi oo ay iska kaashadeen qaban qaabadiisa ururka Soomaaliyeed ee ilaalinta xaquuqda caruurta (SONPPCAN) iyo hayád Nederlandees ah oo la yiraahdo MOVISIE, hase ahaaatee waxaa maaligeliyey mashruucan Caraweelo hayádaha Oranje Fonds, Skanfonds iyo KNR, kuwaasoo dhaqaale ku bixiya barnaamijyada horumarinta arrimaha bulshada.
Kulan waxaa ka soo qeyb galay waaladiin badan oo Soomaaliyeed oo u badan hooyooyin, waxaana looga dooday waxyaabaha dib u dhaca ku ah dhaqanka Soomaalida, isla markaana loo dhiiri gelin lahaa caadooyinka wanaagsan ee Soomaalida lagu amaani karo.
Ka qeyb-galayaasha shirka Caraweelo ayaa aragtiyo, waaya-aragnimo iyo doodo la si dhaafsaday ka dib, waxa ay isla garteen inay jiraan caadooyin badan oo dhaawac ku ah dhaqanka Soomaalida, sida; Qabyaalada,Guurka qasabka ah iyo, gudniinka gabdhaha iyo liidista haweenka.
Caadooyinka la amaanay ee ku jira dhaqanka Soomaalida ee shirka Caraweelo laga sheegay ayaa waxaa ka mida; Marti-soorka, Deeqsinimada iyo Is-caawinta marka dhib uu yimaado.
“Waxaanu u sameenay mashruuca Caraweelo sidii Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Nederland ay ka doodaan oo ay ka hadlaan laba arrin, tan koowaad mujtamac kasta waxa uu leeyahay dhaqan uu u helay dhaxal ahaan jiil ka jiil. Waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku jira dhaqankaasi oo loo baahan yahay in lagu dheganaado, laakiin dhinac kale waxaa iyana ku jira waxyaabo yar oo xun xun oo ay tahay in wax laga badelo, waxayna taasi ku timaadaa waqtiga badan oo ay soo jireen,” ayey tiri Jenny Van Eyma oo ka tirsan hayáda Movisie.
Sidoo kale waxaa iyana halkaasi ka hadashay Shamso Xasan oo madax ka ah ururka SONPPCAN oo ku dheeraatay sida ay lagama maarmaanka ah u tahay in Soomaalida ay isticmaalaan inta wanaagsan ee ka mida dhaqankooda, ayna isaga tagaan ama ay badelaan cadooyinka duugoobay ee waxyeelada leh.
Ururka SONPPCAN waxaa sanadkii 1989-kii lagu aasaasay magaalada Muqdishu ee caasimada Somalia, waxayna loo sameeyey sidii loo adkeyn lahaa xaquuqda caruurta Soomaliyeed, hase ahaatee waxa sanadkii 2004-tii ka shaqo bilaabay dalka Nederland, si uu wax uga qabto dhibaatooyinka dhinaca isfahan darada ah ee u dhexeeya qoysaska Soomaaliyeed ee caruurta leh iyo hayádaha Nederland u qaabilsan dhowrista xaquuqda caruurta.
Caraweelo, oo ah magaca loo bixiyey mashruuca toosinta dhaqanka, ayaa ah haweenay boqorad ka aheyd dhulka Soomaalida qarnigii 15naad, taasoo la sheegay inay u dagaalami jirtay in haweenka ay helaan xaquuq la mida tan raga.
Sidoo kale waxaa madasha shirka lagu soo bandhigay mashruuc kale oo la yiraahdo ‘Barbaarin’ kaasoo ku saabsan sidii ubadka loogu ababin lahaa barbaarin toosan oo waafaqsan sharciyada dhowrista caruurta ee dalka Nederland, isla markaana, iyadoo aan laga tagin diinta iyo dhaqanka toosan ee Soomaaliyeed.
“Muhiimada aan maanta halkan idin kugu yeernay waxaa sidoo kale ka mida in aan ka hadalno dhibaatooyinka jira ee la xiriira dhinaca korinta ilmaha iyo sidii looga hortagi lahaa in ubadka Soomaaliyeed ay dayacmaan oo ay galaan gacan kale. Waa inaad ogaataan inaad timaadeen wadan horumaray oo xaquuq badan la siiyey caruurta.”ayey tiri Shamso Xasan oo isku-duwaha mashaariicda ururka SONPPCAN.
Shamso waxa ay sheegtay in ururka SONPPCAN uu dhowaan bilaabi doono mashruuc tababar loogu fidinayo hooyooyinka Soomaaliyeed ee degan dalkan Nederland, kaasoo ku saabsan barbaarinta caruurta. “Tababarkan waxaanu ku qaban doonaa magaalooyinka Amsterdam, Tilburg iyo Den Haag. Waxaan sidoo kale tagi doonaa oo aan koorsooyin ka bixin doonaa kaamamka ay ku jiraan Soomaalida ee ku taala magaalooyinka Utrecht, Leersum iyo Alkamaar.”ayey tiri Shamso.
Tababarkan ‘Barbaarin’ waxa maalinaya hayádo Nederlandees ah oo la kala yiraahdo Kinderpostzegels iyo Skanfonds, waxa uuna inta uu socda lagu baran doonaa casharo la xiriira barbaarinta saxda iyo sidii ilmaha loogu ababin lahaa dhaqamada wanaagsan iyo waliba sharciyada dhowrista caruurta iyo qaabka ay u shaqeeyaan hayádaha qaabilsan la socodka ilmaha ee dalkan Nederland.
Shamso waxa ay soo jeedisay talo ah; haddii ay jirto hooyo Soomaaliyeed oo dhibaato ay la soo deristo inay markiiba la kaashato dadka kale ee Soomaalida ee u dhow dhow oo aysan qarsan si markiiba wax looga qaban karo.
Ahmed Mohamed, oo ka mida maamulka ururka SOON ee ka dhisan magaalada Tilburg ayaa isna goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn waxa uu uga mahadceliyey ururka SONPPCAN dadaal ay ugu jiraan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka sababa in qaar ka mida waaladiinta Soomaaliyeed lagala wareego musuuliyada caruurtooda.
Ahmed waxa uu goobta ka sheegay in ka jaaliyad ahaan Soomaalida ku nool Tilburg ay yihiin dad isku duuban iskana war haya, isla markaana Tilburg uusan ka dhicin kiis ilmo dowlada ay la wareegtay. “Waxaan ku guuleesanay oo mudaba furnaa goob maalmaha sabtida iyo Axada aan ilmaheena ku barno tarbiyada Islaamka iyo maadooyin kale ee Iskoolka ay ku qaataan oo aan ka xoojino, taasna waa Ilaah mahadiisa.” ayuu yiri Ahmed.
Muhiimada tababaradaasi ayey Shamso ku sheegtay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ku yimaada faham-darada ee sababay in qoysas badan oo Soomaaliyeed ay waayaaan caruurtooda. Shirkaasi waxaa la isku dhaafsaday doodo iyo aragtiyo la xiriira sidii jaaliyada Somalida ay isaga kaashan lahaayeen sidii ay uga gudbi lahaayeen caqabadaha ka hor imaanaya mararka qaar.
FBI-da Maraykanka oo sheegtay in liiska dadka la doon doonayo ay ku dartay Abuu Mansuur Al-Amriiki